TinyLetter: Tsy misy taratasy momba ny mailaka mailaka | Martech Zone
Alarobia 23 Janoary 2013 Zoma, Jona 19, 2015 Douglas Karr
Midira amin'ireo mpanome tolotra mailaka lehibe amin'izao fotoana izao ary, raha tsy mahay teknika ianao, dia mety ho lany amin'ny menus, endri-javatra, fampiasa, jargon ary tatitra. Indraindray ny majika amin'ny teknolojia dia rehefa misy olona marani-tsaina mandinika ny fizotrany ary mametaka ilay fampiharana amin'ny filàna fotsiny.
TinyLetter fanompoana toy izany.
Mamolavola ny pejinao misoratra anarana. Ny endrika fisoratana anarana dia kanto sy mora ovaina, amin'izay azonao atao ny manao ny TinyLetter ho anao.
Manorata ary alefaso ny TinyLetter anao. Tsy misy modely mety hanahirana anao. Tsindrio iray ary miala ianao. Hamboarinay mihitsy aza ny haben'ny endri-tsoratra sy ny haavon'ny tsipika amin'ny fitaovana finday mba ho tsara tarehy foana ny taratasinao.
Valio ireo mpamaky anao.
Jereo hoe iza no mamaky ny taratasinao, ary tohizo ny resaka miaraka amin'ireo izay mamaly.
Dia izay! Misy fetran'ny fifandraisana 2,000 isaky ny gazety - ka ny rafitra dia natsangana hampiasaina manokana. Raha mila bebe kokoa ianao dia mila mandroso! TinyLetter dia an'ny Mailchimp.
Tags: mailaka Marketingmailaka amin'ny mailakatinyletter